Andro: 11 Desambra 2019
Ny famindrana ny fifanarahana an-dalamby sy làlana ao anatin'ny faritry ny lalàna No. 4735
2019 Transmers Transaction amin'ny sisin'ny lalàna No. Halkalı Fananganana fantsona Metro [More ...]
Ireo mponina ao Istanbul dia hanana rivotra tsara kokoa amin'ny lalamby
Nanomboka ny asa ho fanatsarana ny kalitaon'ny rivotra ny IMM mifanaraka amin'ny lalàna nasionaly ao amin'ireo zotra. Hodinihina ireo santionany avy amin'ny fiara, sehatra sy tapakila tapakila ary hojerena ny angon-drakitra. Ny valiny dia hojerena ary ny zezika dia haringana amin'ny loharanom-baovao. [More ...]
Ny Port Trabzon dia mandray anjara amin'ny toekarena sy fizahan-tany eto an-tanàna
Ny ben'ny tanàna Trabzon Murat Zorluoğlu dia nanao fitsidihana maromaro tamin'ireo tompon'andraikitra Port Port. Nihaona voalohany tamin'ny filoha Trabzon Port Operations Temel Adıgüzel ny filoha Zorluoğlu. Ny fahafaham-pony amin'ny fitsidihana [More ...]
Fanentanana momba ny fanentanana mpikambana maimaim-poana
Eto an-tanintsika, ny asa fitaterana an-dàlana sy an-dranomasina dia nihatsara be tokoa noho ny fiakaran'ny vidin'ny fanondranana sy ny fanondranana. [More ...]
Fanavaozana ny rafi-pitaterana Kocaeli Public!
Fikambanan'ireo tanàn-dehibe ao Marmara sy Kocaeli ben'ny tanàna Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, nihaona tamin'ny lehiben'ny tanànan'i Derince. Zeki Aygün, Ben'ny tanànan'i Derince, Balamir Gündoğdu, Sekretera jeneralin'ny monisipaly Metropolitan, Jeneraly ISU [More ...]
Ekrem İmamoğlu: Tetikasa fananganana Kanal İstanbul?
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan, dia niresaka tamin'ny «atrikasa an-dranomasina» izay natao tamin'ny tsingerin-taonan'ny 564 ny "Tersane-i Amire kuruluş. Naneho ny heviny momba ilay tetik'asa "Kanal Istanbul", hoy i Imamoglu, "Tsy mbola nisy demonia moana teo amin'ny fiainako. [More ...]
Manamboatra tolotra tsara indrindra any amin'ny orinasa Malolos Clark Railway any Philippines ny Orinasa Tiorka
Orinasa iray Tiorka no tonga nandroso niaraka tamin'ny bidra farany ambany indrindra ho an'ny CP S-01 Part an'ny Tetikasa Malolos Clark any Philippines. Malolos Clark Rail tender dia manolotra tolotra farany ambany miaraka amin'ny 160 tapitrisa USD [More ...]
ApplicationSBİKE Mobile Application dia havaozina
ApplicationSBİKE Application ny finday nohavaozina: İSPARK, orinasam-paritany ao Istanbul Metropolitan Municipal, nanavao ny fampiharana finday an'ny İSBİKE, ilay tetik'asa mandroso hatrany. Mora kokoa izao ny manofa bisikileta any Istanbul miaraka amin'ny teknolojia finday. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Ny filoha Sarı Arifiye Karasu dia mangataka ny fanohanan'ny Ankara amin'ny Railway
Ny ben'ny tanànan'i Karasu, Ishak Sari, nandritra ny fitsidihany tany Ankara Arifiye Karasu dia nangataka fanampiana ho an'ny lalamby. Ny Ben'ny tanàna Sarı, dia nihaona ihany koa tamin'ny fandalinana fiovana an-tanàn-dehibe izay Ben'ny tanàna Karasu izay nanohy ny fitsidihany tany Ankara nefa tsy nisy fahatapahana [More ...]
Abdullah Gül University dia handray mpiasa mpampianatra
Abdullah Gül University dia handray mpiasa mpampianatra; Ny fiteny fampianarana amin'ny teny anglisy dia anglisy. 2547, 657 No. Lalàn'ny mpiasam-panjakana 48. ny fepetra voalaza ao anaty lahatsoratra, ny mpiasan'ny 2 ankapobeny ary [More ...]
Muğla Sıtkı Koçman University dia handray mpiasa akademika; Muğla Sıtkı Koçman University Rectorate amin'ireto toerana banga ireto 2547 isa isa ny lalàna, lalàna momba ny fampiroboroboana ny mpiasa sy ny fanendrena ary Muğla Sıtkı Koçman [More ...]
Ny oniversite Manisa Celal Bayar dia haka mpiasa akademika
Manisa Celal Bayar University dia handray mpiasa mpiasa akademika; Vondron-drafitra akademika Manisa Celal Bayar University, 2547 dia nanisa lalàna momba ny fampianarana ambony sy ny lalàna momba ny fampiroboroboana ny mpiasa sy ny fanabeazana momba ny mpiasa ao amin'ny Akisa [More ...]